हिउँ केटी: यो कसले लेखे, यो के बारे मा छ र अनुकूलन | वर्तमान साहित्य
हिउँ केटी यो भर्खरको किताब होइन। वास्तवमा, यो २०२० मा बाहिर आयो र एक सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता बन्नुभयो, लेखक को अघिल्लो किताबहरु जस्तै। जे होस् यो पहिले नै राम्ररी परिचित र प्रशंसित थियो, पुस्तक अझै पनी Netflix मा एक श्रृंखला को लागी यसको हालको अनुकूलन को लागी हो, जो फेरी स्पेनिश लेखकहरु लाई आफ्नो स्पेनिश श्रृंखला को लागी शर्त लगाउँछ।
तर तपाइँलाई स्नो गर्ल को बारे मा के थाहा छ? के तपाइँलाई थाहा छ यो कसले लेखेको छ? यो के बारे मा छ? यदि यो एक अद्वितीय किताब हो वा त्यहाँ एक निरन्तरता छ? हामी सबै कुरा को जवाफ, र धेरै, तल।
1 द स्नो गर्ल कसले लेखे?
2 के हिउँ केटी को बारे मा छ?
3 हिमपात गर्ल कुन विधा हो?
4 के त्यहाँ पुस्तक को एक निरन्तरता छ?
5 त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ?
द स्नो गर्ल कसले लेखे?
यदि हामी एक 'अपराधी' लाई बुझाउनु छ कि हिउँ केटी २०२० मा पुस्तक पसलहरुमा देखा पर्‍यो तब त्यो हो जेभियर कास्टिलो। उहाँ एक पवित्र लेखक हुनुहुन्छ, किनकि यो उपन्यास पहिलो होइन, तर चौथो हो। उनको पहिलो उपन्यास, "त्यो दिन जुन विवेक हराएको थियो" र "त्यो दिन जुन माया हराएको थियो", उसलाई सफलता मा पुर्‍यायो र तब देखि उसले जारी गरेको प्रत्येक उपन्यास संग सफल भएको छ।
तर जेभियर कास्टिलो को हुन्? यो लेखक मालागा मा १ 1987 born मा जन्मिएको थियो। उनको पहिलो उपन्यास लेखिएको थियो जब ट्रेन बाट र उनको काम बाट (एक आर्थिक सल्लाहकार को रूप मा) आफ्नो घर को यात्रा मा। एक पटक समाप्त भयो, र सोच्दै कि उनको उपन्यास प्रकाशित गरीएको भन्दा धेरै राम्रो थियो, उनले प्रकाशकहरुलाई आफ्नो भाग्य कोसिस गर्न को लागी लेख्ने निर्णय गरे। जे होस्, उनीहरुले यसलाई अस्वीकार गरे, र उनले आफैंलाई प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे। तेसैले, जब उनी सफल हुन थाले (र हामी अमेजन मा एक दिन मा एक हजार भन्दा धेरै किताबहरु बेच्ने बारे मा कुरा गरीरहेका छौं), प्रकाशकहरु उनको ढोकामा ढकढक गर्न थाले।
यति धेरै कि उनी एक वित्तीय सल्लाहकार को रूप मा आफ्नो सबै समय नयाँ उपन्यास लेखन बिताउन को लागी बिदाई गर्न को लागी सक्षम भए, यो जान्दथे कि सफलता उनी संगै थियो, जस्तो कि मामला भएको छ।
के हिउँ केटी को बारे मा छ?
हिउँ केटी यसको मुख्य कथानक को रूप मा छ घटना हो कि १ 1998 occurs मा हुन्छ र त्यो आमा बुबा को सुखद जीवन लाई पुरा तरिकाले परिवर्तन बनाउँछ। जब दम्पतीको ३ वर्षीया छोरी एक ट्रेस बिना गायब हुन्छ, सबैजना हराउँछन्, थाहा छैन कहाँ हेर्ने वा कसरी आमा बुबालाई मद्दत गर्ने जो उनीहरुको छोरी कहाँ छन् भन्ने बारे उत्तर पाउँदैनन्।
अन्य उपन्यासहरु को विपरीत, यो महल मा यो प्रकट गर्दछ कि ती संलग्न व्यक्तिहरु को भावनाहरु जस्तै के हो, उनीहरु के पीडित छन् र उनीहरु कसरी भावनात्मक रूप मा छन्, केहि, जुन अघिल्लो पुस्तकहरुमा, यति झलक थिएन।
हामी तपाइँलाई सारांश छोड्छौं:
Kiera Templeton कहाँ छ? न्यूयोर्क, १ 1998,, धन्यवाद परेड। Kiera Templeton, भीड मा गायब। शहर भर मा एक उन्मत्त खोज पछि, कसैले कपाल को केहि कवहरु कपडा कि सानो केटी लगाएको थियो को छेउमा भेट्टाए। २००३ मा, केरा आठ बर्षको हुनुहुन्थ्यो, उसका आमा बुबा, हारून र ग्रेस टेम्पलटन, घरमा एउटा अनौठो प्याकेज प्राप्त गर्दछन्: एक VHS टेप एक अपरिचित कोठामा खेल्ने Kiera को एक मिनेट को रेकर्डि with संग। आफ्नो अघिल्लो उपन्यासहरु को 2003५०,००० भन्दा बढी प्रतिहरु बेचे पछि, जेभियर कास्टिलो एक पटक फेरी द स्नो गर्ल, मिरेन ट्रिग्स को गहिराई मा एक अँध्यारो यात्रा, एक समानान्तर अनुसन्धान शुरू गरीरहेछन् र थाहा पाउनुभयो कि दुबै उनको जीवन जस्तै Kiera's अज्ञात भरिएका छन्।
हिमपात गर्ल कुन विधा हो?
हिउँ केटी, जेभियर कास्टिलो को पुस्तकहरु को धेरै जस्तै, यो रहस्य को शैली भित्र छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यो के बारे मा छ एक रहस्य को अनावरण गर्न को लागी हो, र यही कारण छ कि लेखक दुई समयरेखाहरु को उपयोग गर्दछन् कि उनि intertersperses।
लेख्न को यो तरीका जोखिमपूर्ण छ र धेरै पाठकहरु जो पहिलो पटक को लागी शुरू गर्न को लागी अभिभूत हुन सक्छ किनकि कुनै पल मा तपाइँलाई थाहा छैन यदि तपाइँ वर्तमान मा हुनुहुन्छ, अतीत मा। तर त्यो मात्र सुरुमा हो, जब तपाइँ अझै पनी अक्षरहरु थाहा छैन; तब चीजहरु परिवर्तन र कथानक मा ती twists न केवल तपाइँ किन नायक यो जस्तै हो बुझ्न को लागी मद्दत, तर तपाइँलाई पनि तुरुन्तै पछ्याईएको समयरेखा (र दुबै मा रहस्य छ) लाई एहसास हुन्छ।
के त्यहाँ पुस्तक को एक निरन्तरता छ?
जेभियर कास्टिलो एक लेखक हुन् जो आफ्नो पुस्तकहरु लाई एक आपसमा बाँध्न को लागी, वा उनीहरु को निरन्तरता बनाउन को लागी हो। यो उसलाई "त्यो दिन जुन पागलपन हराएको थियो" को साथ भयो, जसले यसलाई दुई किताबहरु को रूप मा कल्पना गरेको थियो, र पहिलो को सफलता पछि, उनी दोस्रो भाग प्राप्त गर्न को लागी काम गर्न तल झर्ने संकोच गरेनन्। तर के हिउँ केटी को बारे मा? त्यहाँ दोस्रो भाग छ?
खैर, लेखक आफैंले यो प्रश्नको समाधान, आफ्ना पाठकहरुबाट यो प्रश्नको जवाफ दिए। र यो हो कि, अन्य किताबहरु को विपरीत, यो विशेष गरी कुनै एक गाथा को हिस्सा हुन जाँदै थिएन, त्यसैले हामी एक शुरुआत र अन्त्य संग एक किताब को बारे मा कुरा गरीरहेछौं, बिना। निस्सन्देह, यसको पृष्ठहरु को बीच मा हामी अक्षरहरु पाउन सक्छौं, यदि तपाइँ अघिल्लो कामहरु पढ्नुभयो भने, तपाइँ जस्तै धेरै आवाज हुनेछ। त्यसोभए, एक तरीकाले, यो एक निरन्तरता हो, अन्य पात्रहरु संग, लेखक को अघिल्लो उपन्यासहरु।
त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ?
हामी तपाइँलाई चेतावनी दिन्छौं कि, धेरै अन्य किताबहरु संग, हिउँ केटी पनि एक वास्तविक छवि को लागी अनुकूलित हुन जाँदैछ। विशेष गरी, यो भएको छ Netflix जो अधिकार प्राप्त गर्न र एक श्रृंखला रेकर्ड गर्न रुचि राखेको छ।
अहिले सम्म, यस नयाँ श्रृंखला को बारे मा धेरै धेरै थाहा छैन, तर समाचार अप्रिल २०२१ मा बाहिर आयो र Netflix लाई निर्णय लिने बित्तिकै छिटो छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, सबैभन्दा सुरक्षित कुरा सायद २०२२ वा २०२३ सम्म हामी यसलाई देख्न सक्छौं।
यसको अतिरिक्त, लेखक धेरै खुसी छन् किनभने हिउँकी केटी उनको उपन्यास को मात्र अनुकूलन छैन। साथै, यस मामला मा, Globomedia र DeAPlaneta को माध्यम बाट, उनीहरु एक श्रृंखला मा काम गरीरहेछन् कि लेखक को पहिलो दुई उपन्यासहरु लाई समेट्नेछन्: "जुन दिन त्यो पागलपन हरायो" र "त्यो दिन जुन माया हराएको थियो।" अहिले सम्म उनीहरु को बारे मा केहि थाहा छैन, तर पक्कै पनी उनीहरु को बारे मा समाचार चाँडै आउनेछ।
के तपाइँ द स्नो गर्ल पुस्तक पढ्नुभयो? तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हामीलाई तपाइँको दृष्टिकोण बताउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » हिउँ केटी